Title: Collected laws of 2014 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law amending the law relating to the emoluments, allowances and insignia of the chairperson and members of the Nay Pyi Taw Council (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 55/2014) - နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကေ
Title: Law amending the law relating to the emoluments, allowances and insignia of the chairperson and the executive committee members of the Self-Administered Division or Self-Administered Zone (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 54/2014) - ကိုယ်ပိုင�
Title: Law amending the law relating to the emoluments, allowances and insignia of the region or state level persons (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 57/2014) - တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်�
Title: Law amending the law telating to the emoluments, allowances and insignia of the union level persons (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 56/2014) - ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့
Title: Emergency Care and Treatment Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 53/2014 - ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောအရေးပေါ်လူနာစောင့်ရှောက်ကုသခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Inland Water Transport Organization Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 51/2014 - ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Myanmar National Aviation Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 52/2014 - မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: 2014-2015 National Budget Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 49/2014) - ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲေ�
Description/subject: Provisional English title... A Pyithu Hluttaw website link is used as an alternate link to this law but it does not always work. ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
Title: Development Fund Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 48/2014 ) - ပည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: The Requisitioning (Emergency Provisions) (Repealing) Act No. 50/2014 - ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အမိန့်ထုတ်ဆင့် တောင်းဆိုခြင်း (အရေးပေါ်ပြဌာန်းချက်မျ�
Title: Farmers' Rights Protection and Promotion of Interest Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 47/2014) - တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား
Title: Law Amending the Constitutional Court Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 46/2014) - နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥပဒေကို ဒုတိ�
Description/subject: Provisional English title... A Pyithu Hluttaw website link is used as an alternate link to this law but it does not always work. နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Repealing the 1960 Regional Economic Development Fund Act- Pyidaungsu Law 45/2014 - ၁၉၆၀ ကျေးလက်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေအက်ရုတ်သိမ်းဥပဒေ
Title: Bill Amending the 1954 National [judicial?] Titles Law (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional/unofficial title ၁၉၅၄ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ(ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေး)အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း
Title: Bill Amending the Fertilizer Law - မြေသြဇာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း
Title: Law Amending the Auditor General of the Union Law - Pyidaungsu Hluttaw Law 43/2014 - ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ပြင်ဆင်ဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Law Amending the Law on Military Ranks (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 42/2014 ) - စစ်ဘက်ရာထူးနှင့် အဆင့်အခေါ်အဝေါ်များ သုံးစွဲခြင်းကို ကန့်သတ်သည�
Title: Law Amending the Labour Disputes Settlement Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 40/2014 - အလုပ်သမားရေးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Law on the Myanmar Architectural Council - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 39/2014 - မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီဥပဒေ
Title: National Education Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 41/2014 - အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၄၁/၂၀၁၄
Title: Second Amendment of the Registration of Political Parties Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 38/2014) - နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ�
Description/subject: Provisional English title. နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Bill on the Right to Engage in Inland and Coastal Water Transport Business (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: This isaprovisional English title, not an official one. မြန်မာ့ကမ်းရိုးတမ်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကြမ်း
Title: Law on the International Interests in Mobile Equipment (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 37/2014) - နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လေယာဉ်ပစ္စည်းက�
Description/subject: This law presumably relates to Protocol 1 (2001) - dealing with aircraft and aircraft engines - of the Capetown Convention, as explained in these paragraphs from Wikipedia: "The Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment, or Cape Town Treaty, is an international treaty intended to standardize transactions involving movable property. The treaty creates international standards for registration of contracts of sale (including dedicated registration agencies), security interests (liens), leases and conditional sales contracts, and various legal remedies for default in financing agreements, including repossession and the effect of particular states' bankruptcy laws. Three protocols to the convention are specific to three types of movable equipment: Aircraft Equipment (aircraft and aircraft engines; signed in 2001), railway equipment (signed in 2007) and space assets (signed in 2012)..." နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လေယာဉ်ပစ္စည်းကရိယာများဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Law Amending the Limitation Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 36/2014 - ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Judiciary Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 35/2014 - ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Pearl Industry Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 34/2014 - မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Bill on the Nursing and Birthing Council - မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီဥပဒေကြမ်း
Title: Bill Amending the Law on Military Ranks etc. - စစ်ရာထူးအဆင့်အခေါ်အဝေါ်များသုံးစွဲခြင်းကန့်သန့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Highways Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 33/2014 - လမ်းမကြီးများဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Pyidaungsu Hluttaw Act No. 32/2014 - အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Bill on detention... ကျုးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန် ပြင်ဆင်အက်ဥပဒေ
Title: Law Amending the 1951 Act on Sick Leave and Holidays – Pyidaungsu Hluttaw Law No. 30/2014 - ၁၉၅၁ ခုနှစ် ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက် ပြင်ဆင်အက်ဥပဒေ
Title: Law on the Registration of Organizations (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 31/2014) - အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Law on the Registration of Organizations - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 31/2014 - အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
Title: Law Amending The Code of Civil Procedure - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 29/2014 - တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည်ဥပဒေ
Title: Law Repealing the Whipping Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 27/2014 - ကြိမ်ဒဏ်ပေးခြင်းအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Title: Bill Amending the Auditor General of the Union Law - ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ပြင်ဆင်ဥပဒေကြမ်း
Title: Law Amending the Law on the Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 26/2014 - စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Law on the Utilisation of Roads and Bridges - Pyidaungsu Hluttaw Law 25/2014 - လမ်းနှင့်တံတားအသုံးပြူုခြင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Law on the Application for Writs - Pyidaungsu Hluttaw Law 24/2014 - စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Counter-Terrorism Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23/2014 - အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ
Title: Amending National Drug Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 22/2014) - အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
Title: Law Amending The Myanmar Stamp Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 19/2014 - မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ပြင်ဆင်ဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: National Human Rights Commission Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2014 - မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်
Title: National Planning Law for the 2014-15 Budget Year - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 17/2014 - ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
Title: Union Budget Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 18/2014 - ၂၀၁၄ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာငွေရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Union Taxation law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 20/2014 - ၂၀၁၄ ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Commercial Tax Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 16/2014 - ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းခွန်ပြင်ဆင်ဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Law Amending the Income Tax Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 15/2014 - ၀င်ငွေခွန်ပြင်ဆင်ဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Law Amending the Court Fees Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 14 - ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Consumer Protection Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 10/2014 - စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Money Laundering Eradication Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 11/2014 - ငွေကြေးခ၀ါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Development Fund Law for Pyidaungsu Hluttaw Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2014 - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေဥပဒေ
Title: Law Amending the Traditional Medicine Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 8/2014 - တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Revoking the Myanmar Auxiliary Force Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2014 - မြန်မာနိုင်ငံရဲညွန့်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Title: Early Childhood Development Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 4/2014 - ၂၀၁၄ခုနှစ် ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Law Amending the Poisons Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2014 - အဆိပ်များအက်ဥဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Multi-Modal Transport Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3/2014 - ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၄
Title: Law Amending the Pyidaungsu Hluttaw Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 2/2014 - ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
Title: Myanmar Special Economic Zones Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014 (၂၀၁၄ ခ စ
ဥပဒ - ၂၀၁၄ ခ စ
တ ဥပဒအမ တ
Title: 2014 Medical Council Bill - ဆေးကောင်စီဥပဒေကြမ်း
Title: Bill to Amend the Law on Constitutional Office Appointments (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Title: Religious Conversion Bill - ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း)